Ezona zicelo zibalaseleyo zokwenza izilayidi ze-Android kunye ne-iPhone, i-Emulator.online ▷ 🥇
Ii -apps ezenziweyo isilayidi Bayanda kwimfuno ngenxa yokuba nabani na anokuziva ngathi uchwephesha olungisa iifoto zabo ngeziphumo ezithile kwaye wabelana ngazo "noluntu".
Imiba eyahlukeneyo inokuchaphazela ukhetho lwesicelo sokusetyenziswa, njenge:
la uhlobo lweziphumo-Lonke usetyenziso oluxabisa ityuwa yalo kufuneka lubonelele ngomgangatho olungileyo, nangona kucacile ukuba akufuneki sicinge ukuba isiphumo esinye, ngokumangalisayo njengoko kunokuba njalo, sinokwanela ukwenza umboniso wesilayidi ophambeneyo;
la ukusebenziseka lulaImiyalelo kunye nebar yesixhobo kufuneka ibenomdla ukwenza umsebenzi ubelula kubasebenzisi;
la ulwabelwano ngokwabelana: Ukwabelana ngokukhetha kufuneka kufikeleleke .... cofa !!
Kule nqaku, siya kuzama ukubonelela ngesikhokelo esiluncedo kubo bonke abo bafuna ukuzama ithamsanqa labo ngokusetyenziswa kwesilayidi ngokuchaza iimpawu zabo, ubuchule babo kunye nobubi babo. Ukwenza izinto zibe lula, sizahlulahlula eli nqaku amacandelo amathathu, ezinikezelwe ngokukodwa kubasebenzisi Android, ezinikezelwe ngokukodwa kubasebenzisi iPhone kwaye enye inikezelwe kwizicelo ezikhoyo zesilayidi kwi bobabini Iintetho
OKUFUNDILEYO FUNDA: Iinkqubo ezingama-30 zokuhlela iividiyo kunye nokuhlela iimuvi (i-Android ne-iPhone)
Olona hlobo lwesilayidi lusebenzayo lwe-Android
a) Ifoto yeFX Wallpaper:
Ngaphandle kwamathandabuzo, sesona sicelo saziwayo kwishishini elinokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezili-13.
Isicelo sinikezela ngemisebenzi emininzi, ekuvumela ukuba ulayishe iifoto, uyilo lwesilayidi, yongeza oopopayi, usete imibala, iziphumo, nokunye okuninzi. Ifoto yeFX Wallpaper inomhleli obalaseleyo weefoto, iyenzeka ngokwezifiso, kwaye ikuvumela ukuba wenze udonga olukumgangatho ophezulu. Ukongeza, inomdla kakhulu kwaye ke kulula ukuyisebenzisa nkqu nakumava angenamava.
Ukungancedi kubandakanya ukungakwazi ukumilisela ikhamera kusetyenziswa usetyenziso, utyekelo lokuwa xa kukho iifolda ezininzi ezivulekileyo, kunye nokusilela kokujikeleza ngokuzenzekelayo kweefoto.
Isibini) Ifoto yesilayidi kunye nomenzi wevidiyo:
Esi sicelo sinikezela ngamava okwakha isilayidi ngokugqibeleleyo ngokudibanisa kwendibaniselwano enomdla kunye nezixhobo eziphambili.
Ifoto yesilayidi ibonelela ngenani elikhulu leziphumo, amacebo okucoca ulwelo kunye nezakhelo, ezihamba kunye nolawulo lomxholo olula owenza ukuba kube lula ukwenza imiboniso yesilayidi esemgangathweni ngokongeza iziqeshana eziqulathwe kwigalari kwiifolda ezahlukeneyo. Kwangelo xesha, kunzima ukwabelana ngeevidiyo ezigciniweyo; kwakhona, umgangatho womfanekiso utshintsha ngokwenqanaba elikhethiweyo.
C)IPHGRAM -Umfanekiso weSilayidi yoMculo:
Le app yesilayidi yenza ukuba kube lula nakubani na ukuba afake iifoto, ukhethe umculo awuthandayo, ukongeza izihluzi kunye neziphumo, enze owazo umboniso wesilayidi kwaye awabelana ngawo nehlabathi kwaye ngokuqinisekileyo lolona hlelo lokusebenza lufanelekileyo lwabaqalayo.
IPixgram ikuvumela ukuba ugcine umboniso wesilayidi kwiifomathi ezahlukeneyo, unoluhlu oluhle kakhulu lokucoca ulwelo, kwaye ufuna usetyenziso lomculo wakho buqu. Isenokungabi yeyona app ingcali kwintengiso, kodwa iyawenza umsebenzi.
kwakhona) Umyili wentetho:
Umyili wentetho Ayikunandiphi ukungaziwa kwezicelo eziboniswe kumanqaku adlulileyo, kodwa inikezela ngamathuba aphawuleka ngokwenene kwabo babaqalayo ekwenzeni izilayidi zesilayidi: enkosi ujongano olunomdla, kulula kakhulu ukulayisha iifoto, ukuzikhangela, ukumisela ukudlala kwakhona ngokungakhethiyo kunye nokunye okuninzi. Kukho iwijethi yohlaziyo lwefoto oluzenzekelayo, ekuvumela ukuba ungeze ezintsha.
Kwelinye icala, ukwenza ukuba isikrini esibanzi sithambekele ekungqubekeni kwaye singenazo izinto ezikwicandelo elifanayo.
Isakhelo sosuku Sisicelo esenzelwe abahleli abaziingcali kwaye sinika abasebenzisi ipakeji enezinto, ezihamba kunye nemenyu enokwenziwa ngokwezifiso kunye nolungelelwaniso olunxibelelanayo. Isicelo sinokusetyenziswa kwi-Intanethi kwaye kunokwenzeka ukuba wenze imiboniso yesilayidi esemgangathweni, usebenzisa imisebenzi eyahlukeneyo ukunika ukubonwa okukodwa kwimiboniso yezilayidi zakho.
Ngelishwa, i-Dayframe ithambekele ekuchitheni ibhetri yesixhobo esetyenzisiweyo ngexesha elifutshane kwaye kunokuba nzima kwabaqalayo ukuyisebenzisa.
Olona hlobo lwesilayidi lusebenzayo lwe-iPhone
I-PicPlayPost Isicelo esinomdla esikuvumela ukuba ubeke ngokulula iifoto, iividiyo, umculo kunye nee-GIF, ukuyenza ukuba ibe yenye yezona zicelo zidumileyo zohlobo lwazo. Isicelo siyafikeleleka nakubani na kwaye sibonelela ngemisebenzi efanelekileyo yokujoyina iividiyo kunye nemifanekiso ngokulula.
I-PicPlayPost Inonxibelelwano olunomdla olukuvumela ukuba ufake iifoto ezili-9, GIF okanye iividiyo ngeprojekthi nganye kwaye zibenze bathande ngakumbi ngokhetho olulungileyo lweziphumo eziphezulu.
Umculo ogqityiweyo weSlideshow kunye nokusetyenziswa kwewatermark kwisilayidi, nangona kusenziwa ngokwezifiso, akumnandi kakhulu.
Isibini) Isilayidi seLebhu:
Isilayidi seLebhu ikuvumela ukuba uguqule iifoto zibe ziividiyo kwimizuzu nje embalwa ngokufaka umculo owakhelweyo okanye owenziweyo kwiapp. Izilayidi ezenziweyo zingagcinwa kwifowuni ephathekayo, zigcina ubungakanani bazo, okanye zabelwane ngazo kwiprofayili zentlalo esele zilungisiwe kwisisombululo esifunwa yinethiwekhi yoluntu abafuna ukwabelana ngayo. Isicelo sikwabonelela ngeendlela ezininzi zokucoca kwimifanekiso yakho.
Isiphene ekuphela kwaso Isilayidi seLebhu ayivumeli ukusebenzisa umculo ngu iTunes ukuba nenxaxheba Facebook O Instagram. Isesisicelo esikhethekileyo.
C) Ifoto yokuboniswa komlawuli:
Umlawuli wentetho ivumela iiPhone / iPad ukuba liqonga lemiboniso yezilayidi, usebenzisa iifoto ezigcinwe kwisixhobo. Inani leziphumo ezinikezelweyo ziyonwabisa, ngakumbi xa ucinga ukuba usetyenziso lukuvumela ukuba ugcine isilayidi ngaphakathi HD nakwisikrini esipheleleyo. Ukongeza, isicelo sikuvumela ukuba wabelane ngeesilayidi kwinethiwekhi yoluntu ngaphandle kobunzima.
Umlawuli wentetho Inomhleli weefoto olula kakhulu kwaye unomdla kwaye ikwavumela ukuba wenze iividiyo zomculo.
Ngokuchasene noko, isantya sokuqhubekeka sinokuphazamiseka kwimemori yeiPhone. Ngaphandle koku, isengoyena menzi wesilayidi ubalaseleyo iOS.
Iifoto Ayinawo onke amanqaku ezinye izicelo ezinikezelayo, kodwa sisicelo ekulula ukusilawula nokulawula xa usenza izilayidi zesilayidi. Le app ikuvumela ukuba usete ixesha lokudlala kwifoto nganye efakiweyo emva koko uyihlele ukuba uskrole ngomculo wakho ongasemva ongawukhuphela nawoiPod.
I-PicFlowKwimizuzu nje embalwa, ikuvumela ukuba wenze umboniso oguqukayo kunye noopopayi oza kwabelana kuFacebook okanye kwi-Instagram, usike imifanekiso kunye nomsebenzi wesilayidi kunye nepinki kwaye usebenzise enye yeenguqu ezili-18 ezikhoyo.
Ngelishwa uguqulelo lwasimahla luthintelwe kwaye ikhowudi yevidiyo ayiqhubeli phambili Iifayile ze-30.
iMovie inikeza inani elininzi leempawu kunye nenqanaba eliphezulu lomgangatho, okwenza ukuba ibe yenye yezona zicelo zibalaseleyo zokwenza izilayidi zemiboniso iPhone. Isicelo sikuvumela ukuba utshintshe iaudiyo yekliphu nganye oyenzayo kwaye inike uluhlu olubanzi lweemixholo zebhanyabhanya, utshintsho, iziphumo zesandi kunye nezihloko. Ngenxa yezi zizathu, abasebenzisi abaninzi bayazityeshela ezinye izicelo kwaye basebenzise iMovie kuzo zonke iimfuno ezinxulumene nokuhlelwa kwevidiyo okanye ukwenza isilayidi.
Izizathu zokuba kutheni le app yenzelwe iPhone Enye yezona zinto zilungileyo ekudaleni i-slideshows. Kwelinye icala, isicelo asibhetyebhetye kwaye kunzima ukujongana nabaqalayo.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Yenza iividiyo zeefoto, umculo, iziphumo ezifana nesilayidi somfanekiso kwiPC
Eyona ndlela ilungileyo yeSlideshow yeeNkqubo ze-Android kunye ne-iPhone
a) Ividiyo yeVivaVideo:
Iyafumaneka kuzo zombini izixhobo Android ukuba iPhone , Ividiyo yeVivaVideo inenguqulo esisiseko onokuyisebenzisa kwaye uyikhuphele simahla. Ngelixa uhlela imifanekiso yakho, unokukhetha kwenye "imo yenkqubo" yokuguquguquka okukhulu kunye "imo ekhawulezayo" yenguqulo ekhawulezileyo kunye nezenzekelayo. Ikhamera kwisicelo ikuvumela ukuba urekhode iividiyo ngelixa ufaka ngaphezulu kwe-60 yeziphumo ezizodwa. Emva koko unokongeza utshintsho, isandi kunye nokuphinda ividiyo oyenzileyo.
Xa uphuma kwi-app, utshintsho lwakho luya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwaye unokudibanisa ngokulula iividiyo ngenkalo yebhodi yamabali.
Ngelishwa, inguqulelo yasimahla yeapps ibandakanya i-watermark engathandekiyo kwiividiyo, inezinto ezininzi zentengiso, kunye nemida yemizuzu emihlanu yesilayidi. Ukuphelisa olu dandatheko, kuya kufuneka uthenge uhlobo lwenkqubo $ 2,99,3.
Iyafumaneka kubo bobabini abasebenzisi Android bobabini abasebenzisi iPhone kwaye inikezela ngeetoni zokhetho ukuhlela izilayidi zesilayidi, iifoto, iividiyo kunye nokunye. I-Movavi Imahala, kwaye ividiyo kunye nokuhlelwa kweaudiyo kubonelela ngamava obuchwephesha, kunye nokukwazi ukubandakanya iziphumo ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngeendlela ezininzi zevidiyo. Kuyenzeka ukuba ubuyise isandi, urekhode ngokuthe ngqo kwiscreen ukuze ubambe iifowuni zevidiyo okanye ezinye izinto ezenzeka ngexesha lokwenyani kwisixhobo sakho kwaye nokwenza ngokwamanani okanye ukuphinda ubeke umfanekiso ngokulula.
Kukho nezinye izinto ezipholileyo njengokukwazi ukwenza imibhalo engezantsi yesiqhelo. I-Movavi Ikwakhona kuhlobo oluhlawulelweyo, onokukhetha kuzo kuqala kuhamba $ 59,95. Abanye abasebenzisi bazifumene izixhobo kunzima ukuzisebenzisa ngaphandle kokuba be-tech-savvy.
Iyafumaneka kuzo zombini Android ukuba iOS Kwaye sisicelo esifanelekileyo sokwenza imiboniso yeendaba ze-Instagram kuba ifomathi yevidiyo kwisikwere. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku, inokhetho lwefomathi yomfanekiso olungeleyo Instagram kunye IGTV. Inguqulelo yasimahla yale app inika umda kwisikwere somboniso wesilayidi ukuya kwimizuzwana engama-30 kunye nesilayidi esime nkqo kwimizuzwana eyi-11, nto leyo iyaphazamisa.
Konke kwinto enye, MoShow kuya kuba nzima ukuyisebenzisa ngaphandle kokutyala imali kuhlobo lwenkqubo. Isicelo MoShow nxweme olupheleleyo $ 5,99 ngenyanga okanye $ 35,99 ngonyaka.
Njengoko unokuthelekelela ngokulula, zininzi izicelo ezinikezelwe ukuhlela iifoto kunye neevidiyo kwaye kuhlala kunzima ukuziqonda kwaye ukhethe ukuba zeziphi ezizezona zilungele iimfuno zethu kwaye uzichaze zonke.
Sizamile; Ngoku okuseleyo kukuhla uye kwishishini!
OKUFUNDILEYO FUNDA: Isicelo sokwenza amabali kwiifoto kunye nevidiyo zomculo (i-Android-i-iPhone)